Marka hay'adaha canshuuraha aysan ku siin sicir u dhigma nidaamka canshuurta laga jaro, shaqaalaha qaarkood, qiime dhexdhexaad ah waa in lagu dabaqo. Heerkan, oo adiga adigu go'aamin doonta, ayaa loo dejiyey iyadoo la adeegsanayo miisaska heerka caadiga ah. Shabakadahaan waxaa xoojiyay sharciga maaliyadeed ee 2021.
Canshuurta laga jaro: heerka lacagta laga jaro
Iyada oo qeyb ka ah canshuurta laga jaro, maamulka canshuuraha ayaa ku siiya heerka canshuurta ee shaqaale kasta.
Waxaa jira dhowr dariiqo oo lagu go'aamiyo sicirka canshuurta:
heerka sharciga guud ama heerka loo xisaabiyo reerka cashuurta iyadoo lagu saleynayo soo-celinta canshuurta ugu dambeysay ee shaqaalaha;
sicirka shaqsiyeed ee ikhtiyaar u ah lamaanayaasha isqaba ama ku xiran PACS. Sicirkaan waxaa loo dejiyay lammaane kasta iyadoo loo eegayo dakhliga shaqsiyadeed. Dakhliga guud ee qoyska canshuurta ayaa wali kuxiran heerka canshuurta qoyska ...
Canshuurta laga jaro 2021: shabakadaha heerka ugu hooseeya July 10th, 2021Tranquillus
READ 2021 gunno tababar
horeShaqaaluhu ma dalban karaa faa'iidada gunno sanadle ah oo lagu bixiyo heshiiskiisa wadajirka ah haddii ay dhacdo in loo baahdo xil ka qaadistiisa?
socdaBooqashooyinka caafimaadka ee 2021: waa maxay waajibaadkaagu?
Tuuladayda, magaaladayda oo kala guur ah